Yalho - Wikipedia
Yalho, ama Yahlo waa Magaalo ku taal gobolka Bari Puntland Soomaaliya, waxay 50 kilometres (31 mi) ka xigtaa dhanka koonfureed magaalada Boosaaso. Waa Irridda keliya ee gaadiid dhuleed ka soo geli karo Magaalada Boosaaso, waxaa la asaasay qarnigii 16-aad, Waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan dalka Soomaaliya. Yalho waa mid ka mid ah magaalooyinka laga helo Xijjiga waxa kale oo magaaladu leedahay khayraadyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Dahabka, Shidaalka iyo Macdanta. Waxaa ku fariisin ciidan oo muhiim u ah hubinta waxaayba gelaya gudaha magaalada Boosaaso.
Yalho maamul ahaan waxay ka tirsan tahay degmada Bosaso ee xarunta gobolka bari, Sidoo kale magaaladu waxay leedahay maamul hoosaad waxaana ka jira ururo dhowr ah oo ay leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. Waxa ku yaal saldhiga weyn oo ay leeyhiin ciidamada daraawishta iyo PSF. Deegaanka waxaa degan dhishiishe gaar ahaan Rer Xaaji, Yoonis iyo qabaa'il kale oo ka mida beelweynta Dishiishe.
Waxaa jira khilaaf la xiriira xilligii la asaasay Magaalada maadaama magaaladu tahay magoolo soo jireen ah, waxaase la isku raacsanyahay in magaaladani jirtay ka hor qarnigii 16-aad. Yalho waxay leedahay Ilo biyeedyo aan go'in waxaana hareereheeda ah noocayada kala duwan ee dhirta "Xijjiga" sidoo kale magaaladu waxay leedahay deegaamo dhul daaqsimeed ah. Arrimahan oo la isu geeyay ayaa kadhigay magaalada mid soo jireen oo leh cimri facweyn maadaama ay kulansatay waxyaabihii nolosha dadka qiimaha u lahaa.
Yalho waxag leedahay beero isugu jira beero khudaareed waqtiile ah iyo beeraha geed miroodku ka boxo ee maguurtada ah, waxaa jira kaymo waaweyn oo isku dhafan indhahana u roon soona jiita dalxiisayaal fara badan. magaaladani waxay ka mid tahay meelaha ay u soo dalxiis iyo doogsi tagaan bulshada reer Boosaaso.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yalho&oldid=205379"
Last edited on 27 Agoosto 2020, at 14:35
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Agoosto 2020, marka ee eheed 14:35.